Xuzhou Erose Glass Products Co., Ltd. bụ ọkachamara soplaya aku mmepe, mmepụta, obibi, mbukota, na ngwaahịa, ire na ọrụ nke tubular iko wares ruo ọtụtụ afọ, na nke a na ihe onwunwe ugbu ewu ewu na gburugburu ebe obibi-echebe ihe, isi ngwaahịa agụnye ọgwụ iko vials, laabu iko ule tube na karama, ntecha mbukota karama, nri iko nchekwa ite, tii iko wares, onyinye mbukota na mma iko karama, na pụrụ iche ahaziri iko wares. Products of high quality, fashionable, ọtụtụ-eji iche iche nke mbukota ebe, ọ bụghị naanị nwere obosara pụta anụ ụlọ ahịa ahịa, ọzọ ngwaahịa na-exported na Europe, America, Asia na mba ndị ọzọ.
Erose iko karịrị afọ mgbe gbasoo "àgwà nke ngwaahịa iji lanarị, ịtụkwasị obi na mmepe ọrụ" azụmahịa nzube. Mbọ iji na-enye gị na elu-edu ngwaahịa na àgwà ọrụ. Nwere a ọkachamara, raara onwe ya nye imewe management otu, site na ngwaahịa imewe, ebu Ndinam, ịkpụzi, ngwaahịa obibi, ngwaahịa mbukota, ka onye ọ bụla akụkụ na Filiks na-rigorously anwale ma na-achịkwa.
Erose iko mgbe mejuputa echiche nke ndị ahịa uru e kere eke, ihe na ngwaahịa ndị OEM na ODM, maka ndị ahịa ahaziri ngwaahịa izute mkpa nke dị iche iche ahịa, na nọgidere na-enye ndị ahịa na ngwọta na aro. Ọzọkwa ngagharị na ọhụrụ, na mma.
Obi ụtọ na-ekele unu na-emepe na ókè nke nkwurịta okwu. Anyị gakọrịta gị ezigbo onye!